Ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 dị mkpa ugbu a maka ndị ọrụ Air Canada niile
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 dị mkpa ugbu a maka ndị ọrụ Air Canada niile
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ọ bụrụ na ịghara ịgba ọgwụ mgbochi nke ọma site na Ọktọba 30, 2021, ọ ga -ebute nsonaazụ yana gụnyere ezumike ma ọ bụ nkwụsị akwụghị ụgwọ, ewezuga ndị tozuru maka ebe obibi.
Air Canada na -ewebata amụma ahụike na nchekwa ọhụrụ.
Ekwesịrị ịgba ndị ọrụ Air Canada niile ụgwọ ọrụ na ọgwụ mgbochi ọrịa coronavirus.
N'okpuru amụma ịgba ọgwụ mgbochi, a gaghị enye nnwale dị ka ihe ọzọ.
Air Canada taa kwuru na ọ wepụtala iwu ahụike na nchekwa ọhụrụ iji chebe ndị ọrụ na ndị ahịa nke na-eme ka ọ bụrụ iwu na a ga-enye ndị ọrụ ụgbọ elu ọgwụ mgbochi ọ bụla na COVID-19 yana kọọ ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ha dị ka Ọktoba 30, 2021. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ụgbọ elu na -eme ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke ọnọdụ ọrụ maka onye ọ bụla ụlọ ọrụ ahụ goro ọrụ.
Kemgbe mmalite oria ojoo Air Canada abụrụla onye isi na ịnakwere usoro sayensị dabere na nzaghachi COVID-19. Nke a gụnyere ụlọ ọrụ ụgbọ elu so na ndị mbụ chọrọ nyocha ihu igwe nke ndị ahịa tupu ịbanye, iwu mkpuchi mkpuchi ihu na iji nyocha. Mkpebi ka achọ ka e nye ndị ọrụ niile nke isi okwu Air Canada, Air Canada Rouge na Air Canada ezumike zuru oke ma kọọ ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ha bụ atụmatụ ọzọ iji hụ na nchekwa na ọdịmma nke ndị ọrụ na ndị ahịa niile.
n'okpuru iwu ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, a gaghị enye nnwale dị ka ihe ọzọ. Ọ bụ ezie na Air Canada ga -arụ ọrụ ya ịnabata ndị ọrụ nke enweghị ezi ihe kpatara ya, dị ka ọnọdụ ahụike, enweghị ike ịgba ọgwụ mgbochi, enweghị ike ịgba ọgwụ mgbochi nke ọma site na Ọktoba 30, 2021 ga -enwe nsonaazụ ruo yana gụnyere ezumike ma ọ bụ nkwụsị akwụghị ụgwọ, ewezuga ndị tozuru oke maka ụlọ. Iwu nke Air Canada kwekọrọ na ọkwa gọọmentị Canada kwuru n'oge na -adịbeghị anya nke na -achọ ka ndị ọrụ na ngalaba ụgbọ elu, ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ mmiri na -achịkwa nke gọọmentị etiti nyere ọgwụ mgbochi na njedebe nke Ọktoba 2021.
Air Canada na -akwụsi ike na mmepe na -aga n'ihu na itinye usoro nchekwa na usoro ọhụụ ka ha na -adị nke na -adabara ndị ahịa. Usoro ndị a dị mkpa maka ịmalitegharị ụlọ ọrụ ụgbọ elu nke nchekwa nke, ewezuga ime ka ndị Canada nwee ike ịga njem n'efu, bụkwa ihe dị mkpa maka ọrụ akụ na ụba na Canada.